Rapists संग जेल मा के के हुन्? जेल मा rapists गर्न मनोवृत्ति कस्तो छ?
, को "eyewitnesses" बाट अफवाहहरु र साँचो जानकारी रकम बुझ्न तिनीहरू rapists संग जेल गरिरहेका छन् के विषयमा गर्न, यो विवरण मा आपराधिक कोड को धेरै लेख, क्षेत्रहरु र colonies बीच मतभेद अध्ययन गर्न आवश्यक छ।
लेख 131-135 यौन दुर्व्यवहार वा हिंसा लागि दण्ड चाहिन्छ। तिनीहरूले हेर्न यौन सम्बन्ध नाबालिग संग, र एक व्यक्ति वा मानिसहरूको समूह द्वारा प्रतिबद्ध अपराध गरेर धम्की, भौतिक शक्ति प्रयोग संग आपसी सहमति बिना सेक्स गर्न बाध्य। को खराब आचरणमा पनि 14-16 वर्ष उमेर अन्तर्गत व्यक्ति को उत्पीडन समावेश छ।
हरेक एक प्रसङ्ग मा रूसी राज्य, र निर्धारित सजाय परिस्थिति मा लागू गरिएको छ। यो एक प्रशासनिक सजाय रूपमा बुझ्ने गरिन्छ - लोक वा राम्रो र आपराधिक (देखि36 वर्ष) को रूप मा। यो आपराधिक incarceration र अलग समाज बाट। प्रहरी गर्न कथन बलात्कारको बारेमा 18, आमाबाबुले वा guardianship को उमेर प्राप्त गरेको छ जो एक व्यक्ति द्वारा पेश गर्न सकिन्छ।
आवेदन पछि न्याय गर्न अपराधियों ल्याउन प्रक्रिया सुरु हुन्छ। को ठेस को गुरुत्वाकर्षण को दृश्य मा, आरोप घरमा वा जेलमा परीक्षण पर्खिरहेका सक्छ।
जेल मा हिंसा को लेख अन्तर्गत आरोप सुरक्षाको र अभियोजन बढी सुविधाजनक कार्यका लागि छुट्टै क्यामेरा परिभाषित गरेको हुनुपर्छ। तर व्यवहार मा, "स्थिति" ठूलो जोस यसलाई अलग गर्न investigative काम सञ्चालन गर्न uchuvstvovat सक्छ लिएको र सहयोग गर्न थाले छैन। तसर्थ, दोषी उहाँले हुन्छ, त्यहाँ बस कुटपिट छन् "प्रशिक्षण", आयोजित जहाँ एक साधारण सेल, राख्नुभएको छन्।
अदालत र चरण
अदालत प्रतिवादी दोषी छ कि निर्णय भने, उहाँले थुनामा को सजाय र स्थान निर्धारण।
व्यवहार मा दोषी अपराध को गुरुत्वाकर्षण भन्दा वितरण। अवधि सानो छ भने, मान्छे निवास स्थान मा बस्ती छोड्न सक्नुहुन्छ। एक भारी रक्सी भने, दोषी सजाय रहन टाढा पठाइएको छ। यो धेरै कारण व्यावहारिक छ। पहिले, एक दङ्गा offender को संभावना कम गर्छ, दोश्रो, सिकार गरेको परिवारका सदस्यहरूले offender मा बदला स्वामित्व कम संभावना छ।
चरण - यो वाक्य सेवा को ठाउँमा दोषी व्यक्ति को परिवहन।
कसरी जेलमा र क्षेत्रमा rapists सामना गर्न
को 90 को दशक सम्म आपराधिक संसारको नियम शुद्धता को विचार मा आधारित। चोरी र हत्या त्यहाँ हिंसा लागि कुनै ठाउँ छ जसमा कुलीन व्यवसायहरुको मानिन्छ। यो "महान" काम, र यो शिकार को बेकारी र निरर्थक खिसी हालन गर्न असम्भव थियो। यस सन्दर्भमा, rapists समाज, मानिसहरू सदस्यहरू तिरस्कार र अपमान गर्न subjected। "Lowering" यौन आक्रमण रूपमा भयो, र मनोवैज्ञानिक निकासी अधिकार को रूप मा।
के हाम्रो समयमा जेलमा rapists पाउनेछन्? 2015 गरेर, प्राथमिकता एक बिट सारे छ। शक्ति संग यौन प्रेरित अब यस्तो लज्जास्पद स्थिति छ। विशेष गरी कैदी ठेस लागि बन्दीहरूको आवश्यकता साबित "वा पीडित दोष भने। यो क्रूरता (maniacs) को लागि त्रासदेखि तरस संग pedophiles र मान्छे को लगातार कम स्थिति रहन्छ। यी अवस्थामा, कुनै बहाना छलफल छैन।
जेल कानुनको Subtleties
कैदीहरूलाई बीचमा प्रत्येक जेल वरिष्ठ "देख" साथै क्यामेरा को शीर्ष चयन गरियो। कोलोनिहरु र एउटै सिस्टम को क्षेत्रमा। तर क्षेत्र "रातो" र "कालो" विभाजन गरिएको छ। यो "रातो" - तथाकथित Cop (प्रहरी) आदेश, कुनै "चोर देख", र सबै निर्णय गर्ने क्षेत्र को नेतृत्व गरेको छन्। को आधिकारिक अधिकार रूपमा "कालो" कुनै विशेष स्थिति, यहाँ सबै द्वारा निर्णय गरिएको चोर व्यवस्था।
नयाँ व्यक्ति एकदम चाँडै एक स्थिति तोकिएको छ। आफ्नो परिभाषा उहाँले जंगली, कला र व्यक्तिगत व्यवहार मा कमाएको को प्रतिष्ठा असर गर्छ। केही सख्त व्यवस्था पालन गर्न, र प्रत्येक मामलामा निर्णय गर्छन्। तसर्थ, "कम" मात्र होइन बलात्कारीबाट, तर "मुसा" कार्यहरू मा अनुचित वा देखेको व्यवहार गर्ने मानिस छन्।
"हटाइएका" र "roosters"
rapists संग जेल मा के के हुन्? "हेरविचार" निर्णय परिस्थिति विवरण बाहिर फेला पार्न र बनाउन। यो महिला विरुद्ध हिंसा आउँदा, त्यसपछि व्यक्ति exculpatory क्षणमा प्रयोग गर्न मौका छ। यो कालो बजार "धूर्त" विवाह को प्रयोजन को लागि विश्वासघात र धोका लागि Mistress, र बदला। यस्तो कथाहरू सहानुभूति संग मानिन्छ र कार्य सफाइ छन्।
मानिसहरूसँग जेलमा rapists के? आफ्नो "petushat"। समलिङ्गीहरूले sorely आपराधिक समाजमा स्वागत गर्दछौं। यहाँ यो बहाना पाउन गाह्रो दोषी, र यो एक साधारण हुन्छ "प्रेमी।"
यो आवश्यक सबै पछि, फरक परिभाषित गर्न, "lowering" र "petushenie" छ - छैन नै कुरा हो। "कम" "कुखुरा।" हुन सक्दैन तिनले बाल्टिन मा सोता को कोठामा एक चम्चा संग खुवाउने गर्न दन्तिये बताइरहेका देखि कैदीहरूलाई कुनै पनि विधिपूर्वक बाहिर वहन सफा। यो एक साधारण दास छ, तर यसलाई आफ्नो विशेषाधिकार छ गर्छ। राम्रो तरिकाले र वफादार भई आफ्नो कर्तव्य प्रदर्शन "ड्रप" भने, यो व्यर्थमा हुन सक्दैन, र पिटे र उहाँलाई संग सेक्स गर्न कुनै कारण। यो एक पाल्तु जनावर रूपमा पनि pet गर्न सक्नुहुन्छ, र राम्रो खाना खुवाउन। तर तपाईं हात उसलाई मिलाउ सक्दैन, र सोही प्लेट देखि खान्छन्।
जेल मा यदि आफ्नो "zapetushili" rapists के? यस्तो व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारी पूरा। मालिकको यौन इच्छा यस पूरा। उहाँले एक प्रेमी वा सबै उपलब्ध यसको सेवाहरू हुन सक्छ। उहाँले एक मास्टर छ भने, "कुखुराको भाले" उहाँलाई र दन्तिये र खुट्टा मालिश शान्त गर्नु सक्छ, तर अरूलाई के छैन। उहाँले धुन र कैदीहरूलाई लागि latrine बाल्टिन सफा गर्न छैन। एक वितरण जस्तै सेक्स र मानव बर्बाद मिश्रण गर्न तार्किक हुन मानिन्छ।
के तिनीहरूले rapists संग र चाहे त्यो त्यहाँ छ राम्रो छ जेल मा छन्? को कैदी "चोर" को नैतिक कोड को आफ्नो निर्दोष साबित भने, त्यसपछि उहाँले "किसान", त्यो छ, सम्मान मान्छे जान हरेक मौका छ। तपाईं म सही थियो भनेर प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्न भने, तपाईं बस यसलाई खुट्टा सधैं सक्छन्। इतिहासको एउटा व्यक्ति चक्कु लगे छ र उहाँको समूह सजाय गर्न स्वीकारे छैन जब अवस्थामा छन्।
कुनै पनि अवस्थामा, कुनै पनि लेख वा मनसाय लुकाउन छैन आवश्यक छ। झ्यालखानाको लामो समाज छुट्टयाएर गरिएको थियो र चाँडै र सजिलै सही जानकारी प्राप्त गर्न। यस मामला मा, छलछाम क्षमा छैन। मात्र निरीक्षण बलात्कारीबाट को अवधि को लागि देख र कैदीहरूलाई अघि सबै भन्दा राम्रो हातले आफूलाई स्थापित छैन भने।
बच्चाहरु विरुद्ध हिंसा
Pedophilia क्षमा र केही जायज छैन छैन। अछुत अवधारणाहरु - को underworld सानो सेन्ट, तर छोराछोरी र आमा मा। जेलमा rapists बच्चाहरु के? तिनीहरूले मारिए, र "रातो" र "कालो" क्षेत्रहरूमा। अवधारणाहरु मा, जस्तै मान्छे थुनामा केन्द्र बाहिर प्राप्त हुँदैन। तिनीहरूले "petushat" र छैनन् "कम" दोषी साबित छ भने, तिनीहरूले बस्नेछन्।
व्यवस्था गरेर, rapists र खूनी पृथक एकान्त राख्नुपर्छ। तर पनि कुनै पनि मामला मा क्षेत्र र "चोर" को टाउको फेला तरिका अनावश्यक तत्व को छुटकारा गर्न। "हटाउनुहोस्" तपाईं "गल्ति" यातायात समयमा, आपतकालीन उपाय रूपमा justifying उम्कन प्रयास गर्दा गर्न सक्नुहुन्छ। एक "दुर्घटना" साइट otsidki मा उत्पन्न गर्न सक्छ।
तर एक पागल वा बलात्कारीबाट को दोषी अदालत प्रमाणित गर्छ र लेख बन्दीहरूको बीच मृत्यु दण्ड को लागि पर्याप्त छ भने, त्यो pedophilia पनि प्रमाणित वा खण्डन गर्नु पर्छ।
जेलमा pedophilia बहाना
आधुनिक guardianship र किशोरीहरूको कहिलेकाहीं आमाबाबुले पागलपन को शैक्षिक जोस मा पुग्न। को दोषी व्यक्ति उहाँले लागि पठाइएको थियो, जेलमा साबित भने, उहाँले गालामा आफ्नो छोरी चुम्बन र गधा मा थप्पड मारा, कि छैन capricious छ, यो छुन र सहानुभूति संग सम्बन्धित छैन। पनि विश्वास क्लब गरे-अप केटी मा परीक्षा के थियो, तर पासपोर्ट मा त्यो एक सानो थियो, र आमाबाबुले suing छन् बारेमा कथाहरू।
जोखिम समूह शारीरिक शिक्षा र कोच को शिक्षकहरू, साथै स्टूडियो र क्लबहरू को टाउको समावेश छ। pedophilia को आजको संसारमा - यो रोग र समाज को डर छ। तसर्थ, परीक्षा को 80% - यो सिर्फ अनियन्त्रित उतेजना छ। तर यो लेखमा suspects, अक्सर, पनि यदि कुनै प्रत्यक्ष प्रमाण हो निन्दा गर्नुभयो।
त्यहाँ बन्दीहरूको एक खोजन हुँदा, के बच्चाहरु को rapists संग जेलमा हुन्छ एक दोषी व्यक्ति दोषी हो वा छैन? तिनीहरूले कुटपिट छन्। निर्दोष साबित नगरेसम्म गर्न चाहने pedophilia कुटपिट सबैलाई मा लेख निन्दा गर्नुभयो। तिनीहरूले एक निश्चित हदसम्म आफूलाई रक्षा गर्न सक्नुहुन्छ। सम्भव रूपमा नजिक छ, तर appreciable हानि यो मूल्य छैन कुटपिट कारण। यस मामला मा, तपाईं "मानिसहरू" फर्कन सही बिना हुनेछ र "कम" गर्न बहाना लागि प्रतीक्षा गर्न सक्दैन।
कसरी जेलमा rapists लागू गर्न, हामी समीक्षा गरेका छन्। तिनीहरूलाई कुनै पनि समयमा मञ्चमा र क्षेत्रमा, जेलमा कहीं बिट,। यो "प्रशिक्षण" भनिएको छ। कैदीहरूलाई अक्सर प्रमाण वा अदालत निर्णय र "कम" पहिले नै जेलमा suspects लागि प्रतीक्षा छैन।
को "lowering" क्षेत्र र कसरी rapists के? विषय धेरै मा कल्पनामा। एक व्यक्तिको टाउको अंडरवियर, maznut मलको वा सुत्दा आफ्नो मुख को एक सदस्य, स्नान slop बाल्टिन र यति मा मा लगाउने गर्न सक्नुहुन्छ। यदि "कम" पनि जेल मा, त्यसपछि तपाईँले "ड्रप" छन् यो असम्भव छ भन्ने क्षेत्रमा लुकाउनुहोस्। क्षेत्र मा "मानिस" (सम्मान), हात मिलाउ नै कप देखि पिउन, र जब यो "ड्रप" थियो बाहिर जान्छ, तब सबै छोयो गर्न गर्नेहरूलाई पनि, "drooping" को रूपमा मानिन्छ गरिनेछ लागि एक मानिस लाग्न सक्छ किनभने । यस्तो छलछाम लागि तुरुन्तै मारे।
को सजाय बाट कृपा
तिनीहरूले तिर्नको लागि मौका छ भने rapists संग जेल मा के के? यदि यो pedophile वा पागल जसको दोषी साबित गरिएको छैन छ, यो एक व्यक्ति किन्न सम्भव छ। प्रत्येक समय व्यक्तिगत रूपमा निर्धारण गरिन्छ र त एक गांठ योगफल वा reusable, सारा अवधिमा हुन सक्छ। को perpetrator अर्को क्षेत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो सजाय को अवधि समयमा भने, तपाईं फेरि भुक्तानी गर्न हुनेछ। अघिल्लो कृपा छलफल छैन।
कसरी जेलमा rapists सामना गर्न स्त्रीको सहमति बिना यौन गतिविधि राम्रो कारण छैन भने? यदि कार्य पीडादायी बाहेक केहि द्वारा जायज छैन आफ्नो इच्छा, सहानुभूति पूरा वा पुनर्खरीद हुन सक्दैन। pedophiles एक बराबरीको मा, पागल सबैभन्दा बेकारी मान्छे हो। त्यस्ता मानिसहरूलाई घृणा तिनीहरूले सामान्यतया पनि परीक्षण अघि जीवित छैन भन्ने छ। एक समयमा एउटा मामला मा4suspects पक्राउ र तिनीहरूले सबै अझै पनि जेलमा हत्या कैदीहरूलाई जहाँ पर्म क्षेत्र, लिपिबद्ध मामला।
झ्यालखानाको - यो जीवन हो
कुनै कुरा के एक व्यक्ति दोषी, बस जेल मा मान्छे। तिनीहरूलाई प्रत्येक - आफ्नो जीवन र समस्या संग। चलचित्रहरू मा jails न्याय र पुस्तकहरू सक्दैन। अपराधीहरूलाई र सामान्य मान्छे को कमी, र सबै जीवनमा बीचमा। मात्र caveat एक मात्र हुन सक्छ: जो कोहीले विश्वास छैन। "राम्रो" त्यहाँ छैन। कसैले अचानक आफ्नो राम्रो-बारेमा ख्याल गर्न थाले भने, यो एक चाल हो। जो कोहीले असम्भव छ घनिष्ठ सुरु गर्नुहोस्। पहिले, त्यसपछि, दोश्रो, यदि "अन्य" कम हुनेछ तपाईं पनि, कम्पनी कायममुकायम गर्न ब्रान्ड-नयाँ बिरूवा संग मैत्री सम्बन्ध, त्यसपछि।
rapists के संग जेल मा के, सही जवाफ दिन सक्नुहुन्छ मात्र आफ्नो वाक्य सेवा छ जो एक। तर यी मानिसहरू सामान्यतया स्पष्ट हुन रुचि छैन, ब्लग लेख्न र लेख लेख्न छैन। त्यसैले तपाईं दोस्रो हात को मौखिक कथाहरू विश्वास छ।
कोट हतियार को - यो के हो? इतिहास र शब्दावली
सैलून "काला रानी", Nizhny Novgorod
पानी मा माटो घुलनशील वा छैन। विभिन्न पदार्थ को विलेयता, घुलनशीलता
गर्मी इन्जिन प्रयोग को पर्यावरण समस्या। समाधान को विधिहरू
मेट्रो स्टेशन "Lefortovo"। Lefortovo जिल्ला आकर्षण
ग्रीवा osteochondrosis संग Schantz कलर: समीक्षा (फोटो)
1 हप्ताको लागि अन्डा आहार। वर्णमाला आहार: अन्डा आहार। को मेनु
Depilation Byly Depil गोल्ड लागि मोम। समीक्षा र आवेदन सुविधाहरू
देश होटल जटिल "रूसी शिकार" समारा मा: प्राणको बाँकी
पुरातत्वविद्-स्लाव भाषाहरु वैलेन्टिन Sedov। Sedov वैलेन्टिन Vasilevich: जीवनी, काम
गोरो बालुवा - आकर्षक कपाल रंग
कार नम्बरको चालक कसरी पाउन
फूल चिया गुलाब - कसरी चयन गर्न